प्रगतीमा लम्कदै नेपाल : १८६ देशलाई उछिनेर बन्यो ‘टप इम्प्रुभर’ ! | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
प्रगतीमा लम्कदै नेपाल : १८६ देशलाई उछिनेर बन्यो ‘टप इम्प्रुभर’ !
पाँच वर्षको स्थिर सरकार बनेपछि विपक्षीहरुको तारो बनेको सरकारले पछिल्लो समय कामबाटै त्यसको जवाफ दिन थालेको छ । सरकारले कामै नगरेको भन्दै अफवाह फैलाउनेलाई सरकारले पछिल्लो पटक एक गतिलो जवाफ दिएको छ ।
नेपाल विकाससोन्मुख देशहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै सुधार भैरहेको सूचीमा पहिलो बन्न सफल बनेको छ । प्रगतिका बिभिन्न सूचकहरुमा विश्वभरमा ‘बटम अप’ बाट मात्र नाम खोज्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा हालै भएको एक सर्वेक्षणले भने नेपाललाई पहिलो बनाएको छ। विगतमा यस्ता सुचकहरुमा नेपाललाई तलबाट खोज्ने गरिन्थ्यो ।
तर, अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुरदर्शी नीति र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यक्रमले यो सूचिको शिर्ष स्थानमा पर्न सफल भएको हो ।
यूरोमनि डटकमले हालै बिभिन्न १ सय ८६ देशहरुमा गरेको एक सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०१९ मा नेपाल लगानीकर्ताहरुको आकर्षणको देश बनेको देखिएको छ। बिरलै आउने यस्ता समाचार समग्र नेपाली अर्थतन्त्रका लागि भने निक्कै खुशीको खबर हो। सर्वेक्षण भएका विकासोन्मुख देशहरुमध्ये नेपाल ‘टप इम्प्रुभर’ हो।
सन् २०१७–१८ मा ६।३ प्रतिशत तथा सन् २०१६–१७ मा ७।९ प्रतिशत बृद्धि भएको देखिएको छ। नेपालमा केही समय यता पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीहरु भैरहेको छ। चीन र भारतले पनि नेपालमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी गरिरहेको तथा अझै लगानीको अवसर खोजिरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
समाचारप्रगतीमा लम्कदै नेपाल : १८६ देशलाई उछिनेर बन्यो ‘टप इम्प्रुभर’ !
अख्तियारमा मुद्धा लागेपछि सात पूर्वकर्मचारीले गरे आत्महत्या